Fironana indostrialy - Fangda Packaging Co., Ltd.
Ny fiantraikan'ny fanaparitahana robot amin'ny indostrian'ny lozisialy
Miaraka amin'ny fampivoarana ny teknolojia lozisialy, tsy tokony ho zatra ilay robot mpanatitra isika. Amin'ny andavanandrom-piainantsika dia maro amin'ireo entantsika an-tsokosoko no natolotry ny mpitatitra, nefa koa misy tanàna sasany nanomboka nampalaza ny robot fanaterana. Mba hampitomboana ny fahalalanay momba ny robot fanapariahana dia hampahafantatra anao ny fiantraikan'ny robot fizarana amin'ny indostrian'ny lozisialy.
A. Ahenao ny fandaniana fotoana hatramin'ny fanaterana
Ny foto-kevitra momba ny fanatanterahana baiko avy hatrany aorian'ny fandraisana azy ara-potoana dia lasa zava-misy. Ireo robot dia hanamora ny famindrana ny baiko avy amin'ny toeram-pamokarana ka hatrany amin'ny fitoeram-bokatra robotic mankany amin'ny fonosana, ny vidiny refy, ny fitoeran-tseranana ary ny kaontenera fandefasana.
B.Mampihena ny lesoka sy ny filàna lozisialy mifamadika
Ny fahafahan'ny robot manoratra angon-drakitra marobe sy manadihady izany noho ny lesoka tamin'ny tena marina dia mitarika fihenan'ny lesoka tsy manam-paharoa.
Vokatr'izany dia tsy hisy ny fangatahana firosoana amin'ny lozisialy logistika mifamadika manodidina ny baiko tsy azo antoka.
C.Mba fepetra fikojakojana misoroka
Na dia tsy mila sakafo na rano aza ny robot dia mila fikojakojana izy ireo.
Ny fitomboan'ny fampiasana robot amin'ny fananganana trano fivarotana sy mandritra ny lozisialy dia mitaky injeniera sy manam-pahaizana bebe kokoa hampihatra fikojakojana fisorohana atosiky ny Internet of Things, ary hamahana ireo olana izay mipoitra. Ny andraikitry ny mpiasa olombelona amin'ny sehatry ny lozisialy dia miova ifotony.
D. Ahena ny vesatry ny asa
Araka ny voalaza etsy ambony, ny fampiasana robot amin'ny indostrian'ny lozisialy dia hisy fiantraikany mivantana amin'ny asa ara-batana ataon'ny mpiasa olombelona.
Na dia toa moraly sy fangoraham-po aza ity, manome fotoana hirosoan'ny mpiasa amin'ny asa feno fahitana sy mahafinaritra kokoa izany.
Ny fampiasana robot ho an'ny lahasa tanana, toy ny mandeha an-tongotra mandritra ny fotoana maharitra, ny fampiakarana ny vokatra be loatra sy ny zavatra be loatra, na ny fanaovana karazana asa ara-batana hafa izay mety tsy ho vitan'ny mpiasa sasany, dia hampitombo ny mpiasa amin'ny alàlan'ny fanolorana asa ho an'ny olona izay tsy afaka miasa amin'ny asa lozisialy nentim-paharazana.
E.Mampihena ny fomba fihemoran'ny fitaterana eo amin'ny mpanamboatra sy ny foibe fizarana
Satria mihamaro ny robot ampiasaina amin'ny fizotran'ny lozisialy, hihena ihany koa ny fahatarana eo anelanelan'ny fomba fitaterana samihafa.
Izany dia ho valin'ny fandalinana haingana ny fiantraikan'ny fitaterana, ao anatin'izany ny toetr'andro, ny toetoetran'ny fifamoivoizana sns.
Farany, ny vokatra mahatratra ny ivon-toerana fanaparitahana haingana dia haingana azo aterina amin'ny mpanjifa.
F.Mahazo hery manodina haingana sy haingana kokoa amin'ny alàlan'ny Internet of Things
Iray amin'ireo tombony lehibe azo avy amin'ny fampiasana robot amin'ny logistics dia avy amin'ny Internet an'ny zavatra.
Rehefa tonga amin'ny Internet ny robot, hitombo ny filàna fampidirana bebe kokoa eo amin'ireo fitaovana samihafa.
Vokatr'izany, ny Internet of Things dia hiditra amin'ny fifandraisana simbiotika amin'ny robot.
Rehefa mivelatra ny ampahany iray amin'ny fifandraisana, dia toy izany koa ny hafa, ary ny mifamadika amin'izany.